Madaxweyniyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo si weyn loogu soo dhaweeyay Beledweyne”Muuqaal+Sawirro” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii ay gaareen magaalada Beledwyne ee xarunta gobolka Hiiraan soo dhaweyn aad u sareysay loogu sameeyay garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne.
Soo dhaweynta labada Madaxweyne loogu sameyeeyay magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka qeybgalay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya oo halkaasi horey ugu sugnaa, maamulka gobolka, saraakiisha Ciidanka AMISOM iyo boqolaal dadweyne oo ku nool magaalada Beledweyne .
Xafladda soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Jabuuti ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fitaax Xasan Afrax isagoo sheegay ciidamada ka socda dalka Jabuuti ee qeybta ka ah AMISOM ay suurta geliyeen in maleeshiyaadka Al-shabaab laga saaro magaalada Beledweyne, waxaana mahadcelin balaaran u jeediyay Madaxweyne Geelle iyo guud ahaan shacabka dalka Jabuuti.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in dowaladaha Soomaaliya iyo Jabuuti uu ka dhaxeeyo xiriir walaaltinimo oo aad u qodo dheer isagoo tilmaamay in xukuumadda Jabuuti ay ka go’an tahay taageerada ay siinayaan shacabka walaalahooda ee Soomaaliya.
Madaxweyne Geelle ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxda Nabad diidka ah ee Al-shabaab wajigii koowaad oo ahaa in maleeshiyaadka Al-shabaab laga xoreeyo magaalooyinka waa weyn isla markaana hadda la bilaabayo wajiga labaad oo lagu furayo wadooyinka ay gooyeen kooxda Al-shabaab.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa uu amaan u jeediyay madaxweynaha iyo shacabka Jabuuti dadaalada ay ku caawinayaan shacabka Soomaaliyeed, isagoo sidoo kale sheegay in taageerada ay dowladda Jabuuti siisay Soomaaliya aysan marna ilaabi doonin.